Ekwela agụụ ga-abịa Android n'ihu oge | Gam akporosis
Ekwela ka nri Edition n'akpa uwe gam akporo tupu oge eruo
Klei, onye Mmepụta nke Ekwela agụụ, na 2014 kwuru na enwere ike ịhụ ya a mobile ụdị site na egwuregwu vidio ya na-ewu ewu. Na 2015 o kwuru ọzọ na ọ ga-abịa na mkpanaka, mana nke bụ eziokwu bụ na ọ nọrọ na iOS, nke hapụrụ anyị ụmụ mgbei tupu nnukwu egwuregwu a lanarịrị nwere nnukwu mmetụ na njirimara na eserese.
Ugbu a, anyị maara na ọ bụ ezie na atụmatụ mbụ bụ maka Ekwela Akwụ cketgwọ n'akpa uwe ka ewepụtara ya na gam akporo na Septemba afọ a, ọ bụ ugbu a ka anyị maara na ọ ga-abata ngwa ngwa karịa ka a tụrụ anya ya. Yabụ n'oge ọkọchị a, anyị ga-enwe ohere igwu egwuregwu vidio a lanarịrị nke anyị ga-ama otu anyị ga-esi dịrị ndụ ogologo oge anyị nwere ike tupu agụụ na-agụ anyị.
Gburugburu gburugburu, site na nri ma ọ bụ ụfọdụ iji mepụta ngwa agha, na ụdị ihe niile dị iche iche, ha ga-eme egwuregwu a ka ọ bụrụ nke kacha mma na gam akporo ma ọ bụrụ na ihe niile na-aga nke ọma ma ha na-eweta ya dị ka nnukwu ọdụ ụgbọ mmiri.
.@IGIHE Ndo, saịtị ahụ kwuru sị Agụụ agụụ #ndroid na-abịa na Sept. Ọ bụghị.
Ọ meela ngwa ngwa 😉 #ihe iju pic.twitter.com/ONYXyBxCs9
- nwachukwu (@nkechi_nwachukwu) July 14, 2016
Ma obu na anyi agaghi enwe ihe ndi ahu nile anyi g’eme, kama anyi aghaghi inwe ya mee ka agwa ụlọ ahụ dị mma na ihe ga-abụ ụfọdụ nsogbu na-ebilite metụtara oge. Egwuregwu vidio ị nwere ike igwu naanị gị ma ọ bụ ndị egwuregwu ndị ọzọ.
Anyị nwere ozi a ekele Klei depụtara n'akara Twitter ya a foto na Ekweghị agụụ na ekwentị Samsung nwere nkwupụta ndị a: «ndo na saịtị a kwuru Ekwela agụụ na gam akporo na-abịa na Septemba. Ọ dịghị otú ahụ, ọ ga-adị tupu ọbụna«. Ozi dị egwu maka egwuregwu gam akporo na-ewetara ya n'obi otu egwuregwu egwuregwu lanarị nke kacha ju ndị obodo na ndị bịara abịa n'anya kemgbe ọ malitere na PC afọ ole na ole gara aga.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Egwuregwu gam akporo » Ekwela ka nri Edition n'akpa uwe gam akporo tupu oge eruo
Pokémon GO dị ugbu a na mba 27 ọhụrụ
Sony Xperia F8331 gosipụtara foto ma gosipụta ụdị dị iche